I-Big Savings Bundle Isebenzisana Nokuvalwa Kweleyisi – SL Raw Virgin Hair LLC.
(2) 12 inch bundle wavy & 14 inch lace closure (1) 14 inch and (1) 12 inch bundle wavy & (1) 14 inch lace closure (1) 16 inch and (1) 14 inch bundle wavy & (1) 14 inch lace closure 24-22-20 inch bundle wavy & (1) 18 inch lace closure Idili lenqwaba
Natural Black Umbala
Amadili Ethu Ahlanzekile Enqwaba Yezinwele Zomuntu WamaNdiya Aza ne 8oz yezinwele nokuvalwa kweleyisi. -Izinwele AKUKHO eziphuma eShayina
Iza nenani elinconyiwe lezinwele ukuze uzuze ukufakwa kwe-weave egelezayo ebukeka ngokwemvelo. Amadili enqwaba ahlanganisa izinwele zethu zemvelo zama-Indian ezinamagagasi
* Kuthathwe izithombe 2 izinqwaba ze-wavy kanye nokuvalwa kweleyisi ye-wavy engu-1
Lo mkhiqizo uthunyelwa emazweni angu-199* Emhlabeni jikelele🌍
Izinwele ezimsulwa zangempela ziyahlukahluka ngokwakheka njengoba umnikezeli ngamunye ehlukile, ezinye zingashelela kunezinye noma zihlanganisa ukuthungwa okwengeziwe. Uma uthenga kithi uzobona ukuthi izinwele zethu zinokubukeka, ukuminyana, futhi zisabela esimweni sezulu.
Umumo: I-Raw Natural Wavy (iyahlukahluka ngezinqwaba ukuze zinqwabele)
Ikhwalithi Yezinwele: 100% I-Raw Wavy Human Hair Weft
Isisindo Sezinwele: 100 amagremu ngenqwaba/ Ukuvalwa kwamagremu angu-45
Ukuvalwa kweleyisi: 4x4 ingxenye yamahhala
Umbala Wezinwele: Omnyama nokunsundu kwemvelo (imibala ingahluka)
Izinwele zingadaywa futhi zishise zifike ku-400°F